Tag: taariikhda emailka | Martech Zone
Tag: taariikhda emailka
Taariikhda Emailka iyo Naqshadeynta Emailka
Tuesday, May 9, 2017 Khamiis, May 11, 2017 Douglas Karr
44 sano ka hor, Raymond Tomlinson wuxuu ka shaqeynayey ARPANET (Hordhaca Dowlada Mareykanka ee Internetka la heli karo), wuxuuna ikhtiraacay emayl. Waxay ahayd heshiis aad u weyn maxaa yeelay illaa xilligaas, farriimaha ayaa la diri karaa oo keliya ayaa laga akhrin karaa isla kombiyuutarka. Tani waxay u oggolaatay isticmaale iyo meel ay ku kala tageen calaamadda & sumaddu. Markii uu tusay saaxiibkiis Jerry Burchfiel, jawaabtu waxay noqotay: Qofna ha u sheegin! Tani maahan waxa aan u maleynay inaan shaqeyneyno